Fitsidihana trano - Wuxi Kuanyang Textile Technology Co., Ltd.
Yoga mitafy lamba
Lamba lamba ivelany
Lamba akorandriaka malefaka
Lamba lamba an-tanàn-dehibe
Wuxi Kuanyang Textile Technology Co., Ltd.naorina tamin'ny 1995, manana traikefa mihoatra ny 25 taona amin'ny sehatry ny lamba. Manolo-tena amin'ny famoronana lamba avo lenta ary koa manome serivisy tsara indrindra.
Wuxi Kuanyang Textile Technology Co., Ltd.matihanina amin'ny fampandrosoana sy ny fampiharana lamba fanatanjahan-tena ivelany sy anaty trano. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, noho ny fanahiana iraisam-pirenena momba ny fandotoana plastika, ny orinasanay dia mifindra amin'ny lamba maharitra sy voaverina.
Ny orinasanay dia manana milina 8-miloko matihanina, milina fanontana 10-loko ary milina fanontana nomerika, mampiasa fitaovana manta avo lenta izahay hahazoana antoka fa azo tanterahana ny eritreritra rehetra momba ny mpanjifa. fahaiza-mamokatra, izay afaka mamaly ny filan'ny mpiara-miasa rehetra.
Taona faramparany Izahay dia mandroso fatratra ny haitao fanontana nomerika hamaly ny filan'ny mpanjifa .Ny teknolojia fanontam-pirinty digital dia fomba fanontana vaovao, mamela ny fizotran'ny sarotra hatao takelaka, manatsara ny maha-izy azy ny fanontana, mahatsapa ny andiany kely 、 maro karazana, Voninkazo marobe, ary mamaha ny dian-tsoratra fanontana nentim-paharazana Fandotoana lehibe, lehibe, sns.
Hanome tatitra momba ny fanandramana sy ny tatitra fanaraha-maso farany miorina amin'ny rafitra 4-point an'ny lamba rehetra izahay, ary koa hanome ny rafitra serivisy aorian'ny fivarotana.
KY dia iray amin'ireo mpamatsy vahaolana amin'ny angovo azo havaozina eran'izao tontolo izao izay manodina sy mamerina mamaritra ny fomba fampiasana loharanom-baovao maharitra manerana izao tontolo izao. Eo amin'ny firenena 18 manerana an'i Azia, Aostralia, Eoropa, Afrika ary i Amerika dia manome herinaratra maitso rahampitso i Veztaz.
NO 190, West Yanyu Road, Qianzhou Town, Distrikan'i Huishan, Wuxi, Jiangsu
misoratra anarana amin'ny mailaka anay! Mifandraisa foana!